Kubbaniyaan Sabaahimaa Baha Afiriikaa (KSBA) Afaan Oromoo afaanota Afiriikaa keessaa ammayyummaadhaan isa olaanaa gochuuf dhaadate - The East African Journal
Kubbaniyaan Sabaahimaa Baha Afiriikaa (KSBA) Afaan Oromoo afaanota Afiriikaa keessaa ammayyummaadhaan isa olaanaa gochuuf dhaadate
December 17, 2016 Akkuma yaadatamu bara 2016 baatii Adoolessaa keessa KSBA n sooftweerii dogoggora qubee Afaan Oromoo qajeelchu hoomishee tajaajila sabaaf akka oolu gadi lakkisee ture. Kana malees, sooftiweeriiwwan biraa kan akka dogoggora seerlugaa qajeelchaa, haasaawaa afaanii barreeffamatti geeddaraafi, sooftweerii tajaajila hiika af-heddee kennu dhihootti hoomishee akka sabaaf gumaachu beeksisee ture.
Dalagaan pirojektii guddaafi haarawaa ta’e kanaa utuu adeemsifamaa jiruu gidduutti garee gorsitoota KSBAfi garee saayinseesitoota dalagaa kanarratti hirmaatan gidduutti maal jalqaba hoomishamuu akka qabuufi projekticha guutuu gochuuf maal akka itti dabalamuu qaburratti falmiin bal’aan godhame. Haaluma kanaan, hunda dursa, guuboowwan jechootaa Afaan Oromoo-Afaan Ingliziitti akkasumas Afaan Ingilizii-Afaan Oromootti hiikan kan jechoota miliyoonota hedduu of keessa qabaniifi logoota Afaan Oromoo guguddoo jiran mara kan hammatan akka qophaawan irratti waliigalamee sooftiweeriiwwan isaan biroo cinatti hojiin isaanii jalqabamee jira. Akka kaayyeffatametti, akkuma guuboowwan jechootaa xumuramanii marsariitiirratti gadi lakkifamaniin sooftweeriin seerluga qajeelchuufi isaan biroonis gadi lakkifamu.
Projectii Sooftiweeriiwwan Afaan Oromoo KSBA haaraawaafi adda maaltu godhaa?
Namoota maraaf tola marsariitiirratti gadi lakkifamuu
Namoota waa gumaachuufi fedhii qaban mara hirmaachisuu
Afaan Oromoo afaanota Afiriika mara keessaa ammayyummaatiin sadarkaa olaanaarra kaa’uu
Wiixataa, Sadaasa 21 bara 2016 ibsa haarawaa waa’ee pirojektii kanaa ilaalchisee akkasumas namoonni Oromoos mit-Oromoos taatan projectii kana keessatti kallattii dandda’aniin hirmmaatanii xumura isaa arguu kan fedhan akkamitti akka danda’aniifi maal akka isaanirraa eegamu ballinaan dhiyeesina.